Ciidamada Dawlada Oo Howgalo Ka Sameeyey Jubada Hoose. – STAR FM SOMALIA
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaano ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Alshabaab oo ka tirsan gobolka Jubbada hoose.
Sarkaal u hadlay ciidamada ayaa sheegay in howlgalka inta uu socday ay ciidanka Kumaandooska Danab waxay ku bur buriyeen fariisimo Al-Shabaab ay lahaayeen.
Sidoo kale Saraakiisha hoggaamineysay howlgalka ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in howlgalka lagu dilay in kabadan 15-xubnood oo ka tirsan Kooxda Alshabaab.
Howlgalada ay ciidamada dowlada ka fulinayeen deegaano ka tiran gobolka Jubbada Hoose ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay sare u kacay iyadoo dhowaan sidoo kale duqeyn ay ciidamada Kenya ka geysteen deegaan ka tirsan Maamul goboleedka Jubbaland.